Ragga Oo Waxyaabahan Ka Raba Xaasaskooda Inkabadan Kulanka Sariirta | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Ragga Oo Waxyaabahan Ka Raba Xaasaskooda Inkabadan Kulanka Sariirta
Aayaha editor Send an email November 19, 2019
La yaab malahan in galmadu ay aad muhiim ugu tahay ragga. Inta badan, raggu waxay qiraan in galmada ay lambarka koowaad kaga jirto liiska waxay guurka ka doonayaan.
Si kastaba ha noqotee, rag badani waxay leeyihiin damacyo kale oo aan ahayn xiriir galmo ama baahi xagga dareenka ah.
Raggu had iyo goor ma weydiiyaan xaasaskooda waxa ay doonayaan, laakiin qaar badan oo ka mid ahi waxay leeyihiin fikrado iyo dareeno ay naftooda ku sii hayaan. Tusaale ahaan, ragga qaarkiis waxay dareemaan dareen mas’uuliyadeed oo ah inay xaasaskooda daryeelaan dhaqaale ahaan, xitaa haddii ay shaqeysato oo uu soo galo dakhli badan.
Hoos ka akhriso qaar kamid ah waxyaabaha ay raggu ka rabaan haweenkooda inkabadan galmada.
Iyadoo galmadu ay aad muhiim ugu tahay rag badan, kuwo badan ayaa haweenkooda k araba kalgacayl badan.
Haddii ay tahay inaad banaanka gacanta uga qabsato, ureebidda farriin codeed kalgacayl leh ama inaad u daldaliigto lugaha—- tusidda inaad daneyneyso adigoo ficillo u marinaya ayaa taabanaya qalbigiis.
Isku day habab kala duwan oo aad ku tuseyso inta aad isaga ka daneyneyso. Waxyaabo fudud ayaad u sameyn kartaa adigoo sidoo kale u sheegaya sida aad u jeceshahay, dhiirigelinaya markuu shaki dareemayo isla markaana u sheegaya inaad ka xuntahay markay wax qaldamaan.
Had iyo jeer waad u tagi kartaa adigoo siinaya dhunkasho uusan fileyn.
Rag badan ayaa og inay muhiim tahay inay ilaaliyaan isla markaana bixiyaan waxay ubaahanyihiin dadka ay jecelyihiin. Seygaaga ha ogaado inaad aaminsantahay kartidiisa, xirfadiisa iyo inaad taageere utahay.
Dhiirigelintaada aad ayay muhiim ugu tahay seygaaga iyo qof kasta.
Waxa ugu muhiimsan ee aad sameyn karto waa inaad ninkaaga dareensiiso inuu yahay nin oo uusan ahayn canug yar.
Mahadnaq iyo xaqiijin
Ragga badankood waxay jecelyihiin in dhabarka laga riixo. Hal ha boo tan lagu sameeyo ayaa ah inaad ammaanto seygaaga inbadan.
Seygaaga ha ogaado inaad qadarineyso sida uu howlkar ah u yahay isla markaana uu ushaqeeyo.
Uga mahadceli sida uu u daryeelo qoyska.
Usheeg seygaaga sida uu ugu qurxanyahay shaatiga.
Dhunko una sheeg inaad run ahaantii jeceshahay isla markaana aad xushmeyso.